पशुमा फैलिएको खोरेत रोगले किसानमा त्रास छाएको छ । खोरेलतले पशु मर्न र अर्कोमा सर्न थालेपछि किसान त्रसित भएका हुन् । प्राविधिकको टोलीले सर्न नदिनका लागि एकातर्फबाट भ्याक्सीन लगाउँदै गएपनि अर्कोतर्फबाट सर्दै गएको बताएकाछन् ।
खोरेत रोगले गाईभैंसी, खसी बाख्रा मर्न थालेको स्थानीयले बताएकाछन् । गाउँपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख तेजबहादुर कार्कीले गाउँपालिकाको आठ वटै वडाका पशुमा खोरेत देखा परेपछि नियन्त्रणमा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘एउटा वडामा देखा परेको जानकारी आउँछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भ्याक्सिन लिएर जान्छौ पुनः अर्को वडामा देखा परिहाल्छ ।’
पशुको खुर, मुख र खुट्टामा घाउ आउने, घाउ पाकेर कीरा पर्ने, ज्वरो आउने, घाँस नखानेजस्ता लक्षण भएको खोरेत रोगले पशु मर्न थालेपछि उपचारका लागि अभियाननै चलाएको प्रमुख कार्कीले बताए । उदयपुरगढी–५ मा खोरेत रोग ल्याएको राँग अन्यत्रबाट ल्याएर काटेर खाएपछि रोग भित्र्एिको कार्कीले बताए ।
लगत्तै गाँउपालिकामा केही किसानले पालेका ३÷४ वटा पशु मरे पछि रोगको पहिचान भएको बताइएको छ । लक्षण देखा पर्नसाथ उपचार कार्यलाई तिव्रता दिनुकासाथै नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान र भ्याक्सिनसमेत लगाउन थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगरले जानकारी दिए ।
हालसम्म गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ६, ७ र ८ का प्रत्येक घरमा रहेका सात हजार गाईभैँसी, आठ हजार बाख्रा, पाँच सय ७० बंगुरमा खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि भ्यक्सिन लगाइसकिएको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक दीपक शर्माले बताए । उनले दशैको मुखमा रोग देखापरेकाले पर्व मान्नका लागि समस्या भएको बताए । टोलीले वडा नं. ५, ६, ७ र ८ वडाको नियन्त्रणमा लिईसकेपनि वडा नं. १, २ र ३ मा सरेकाले नियन्त्रणमा समस्या भएको बताए ।
टोलीले वडानं १,२ र ३ मा एक हजार पाँच सय गाईभैँसी र दुई हजार बाख्रामा भ्याक्सिन लगाईसकेको बताएको छ । महामारीकारुपमा फैलिएको खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले निःशुल्क औषधि उपचार उपलब्ध गराएको अध्यक्ष मगरलले बताए ।
खोरेत पशुलाई लाग्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । यो रोगले सुरु हुँदा पशुको मुखबाट र्याल आउने, जिब्रोमा घाउ आउने, ज्वरो आउने लक्षण देखा पर्दछ । रोग छिप्पिँदै गएपछि पशुको खुरको छालाहरु कुहिने पशु शाखा प्रमुख प्राविधिक कार्कीले बताए । खोरेत रोगबाट जोगाउन पशुलाई गोठबाट बाहिर नलाने, पशुको मुख र खुट्टामा घाउ भएको थाहा भएपछि फिटकिरी पानीले घाउ भएको ठाउँ सफा गर्ने, खान सक्ने आहारा खुवाउने, रोग पशु स्याहार गर्ने व्यक्तिबाट अन्य पशुमा सर्ने भएकाले पशुलाई घाँस, पराल खुवाउने समयमा अलग्गै जुत्ता, कपडा लगाएर खुवाउनु पर्ने, खोरेत रोग लागेको पशुलाई औषधि खुवाएर अर्काे पशुको सरसफाइमा ध्याँन दिनुपर्ने कार्कीले बताए ।